ဂြိုးဘိုငျဒနျ လြှပျစဈကား ထုတျလုပျရေး အမရေိကနျနှငျ့ ယှဉျပွိုငျမှု တိုးမွှငျ့ရနျ တရုတျတိုကျတှနျး - Pandaily
ဂြိုးဘိုငျဒနျ လြှပျစဈကား ထုတျလုပျရေး အမရေိကနျနှငျ့ ယှဉျပွိုငျမှု တိုးမွှငျ့ရနျ တရုတျတိုကျတှနျး
Categories: Industry ကိုPeter Catterall ဧပွီ 21, 2021 ဧပွီ 21, 2021 မှာ Posted
President Biden on Tuesday attending an online event highlighting progress made by American EV firm Proterra. (Source: The White House/YouTube)
အင်ျဂါနတှေ့ငျ အမရေိကနျသမ်မတဂြိုးဘိုငျဒငျက ငိုကွှေးသောအခါ စကျရုံလညျပတျမှုသညျ အတုအပဖွဈနသေော လြှပျစဈဘတျဈကားထုတျလုပျရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးရေးနှငျ့ ရရှေညျတညျတံ့သော သယျယူပို့ဆောငျရေးတို့ကို အကောငျအထညျဖျောရာတှငျ အမရေိကနျ၏ “တရုတျ” နောကျကှယျတှငျ အလှမျးဝေးနသေညျ။
ယင်းမှတ်ချက်သည် မာရက်ဇ်က တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားရှိ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် အွန်လိုင်းကမ်ပိန်းတစ်ခု ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းစက်ရုံကို လည်ပတ်နေသည့် Proterra ကုမ္ပဏီက အမေရိကန်လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်ရေး (EV) ကုမ္ပဏီသို့ အပ်နှံပြီး ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသော အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
ဂြိုးဘိုငျဒနျ ကလညျး သူ၏ ခံ့ညားထညျဝါသော မြှျောလငျ့ခကျြကို ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ပွီး အမရေိကနျ လြှပျစဈဘတျဈကားနှငျ့ ခရီးသညျတငျယာဉျမြား ထုတျလုပျမှုသညျ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ခေါငျးဆောငျတဦး ဖွဈလာစရေနျ သူ၏ အစိုးရက ကမ်ဘာကွီးပူနှေးလာမှုကို တုံ့ပွနျသညျ့ အနဖွေငျ့ ပွညျတှငျးအလုပျအကိုငျမြား တိုးတကျမှုကို မွှငျ့တငျရနျ ရညျရှယျကွောငျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးအများအပြားနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လူစည်ကားရာ ဈေးကွက်တစ်ခုသို့ တရုတ်Green Energy မော်တော်ကား လုပ်ငန်းကြီး သိသိသာသာ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။
အမေရိကန်သည် တန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု လျှပ်စစ်ကား ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Tesla ၏ ရုံးချုပ်တည်နေရာတွင်ရှိသော်လည်း တရုတ်လျှပ်စစ်ကား စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုကို ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ တရုတ်လျှပ်စစ်ကား စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုသည် အမေရိကန်ထက် သုံးဆကျော် ပိုများမည်စာရငျးဇယား.
တရုတျနိုငျငံတှငျ ကာလရှညျကွာစှာ ထှနျးကားခဲ့သညျ့ EV လုပျငနျးတှငျ ခေါငျးဆောငျတဦး အပါအဝငျ Piumbi Motor, Glucky, NIO, After Group, Northern FAW Group၊ Xpeng နှငျ့ Lithium Motor အစရှိသညျ့ နိုငျငံကွီးမြားက ပွညျတှငျးစားသုံးသူမြားအတှကျ အခွခေံအုတျမွဈနှငျ့ ဗဟိုအစိုးရက ကယျြပွနျ့စှာ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
Topics: မွငျကှငျးPiumbridi က ထောက်ပံ့သည့် လျှပ်စစ်ကား လေးစီးတွင် ဘလိတ်ထရီ တပ်ဆင်ထား
ဒါ့အပွငျ တရုတျနညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတှအေပါအဝငျ လှိုငျးတှကေို ဦးဆောငျနတေဲ့ဘှဲ့ဒီဂရီတဈရာကြျောနောက်ပြီးတော့Xiaomiဒီနှစ်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ Green Energy ကားတွေ တီထွင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ ကြေညာပါတယ်။ ရှန်ဟိုင်း ကားပြပွဲမှာ ဒီတစ်ပတ်Huaweiဒါ့အပွငျ Crazy SUV ကားထဲကို ဝငျရောကျခဲ့ပွီး ကိုယျပိုငျဖနျတီးမှုအသဈတှနေဲ့ ရောစပျထားတဲ့ ကိုယျပိုငျဖနျတီးမှုအသဈတှကေို ထုတျဖျောပွသခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို မြင့်မားတဲ့ လျှပ်စစ်ကား ဈေးကွက်ထဲကို အပြိုင်အဆိုင် ဝင်ရောက်လာမှုတွေကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်ကား လုပ်ငန်းအပေါ် မှန်းဆချက်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပိုမိုမြင့်တက်လာနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
တခြိနျတညျးမှာပငျ ဂြိုးဘိုငျဒနျ အစိုးရက ဒျေါလာ ၂.၃ ထရီလီယံ တနျဖိုးရှိသညျ့ ကွီးမားသညျ့ အခွခေံ အဆောကျအဦး အစီအစဉျတခု အပါအဝငျ အမရေိကနျ ဒျေါလာ သနျးပေါငျး ၁၇၄၀ သနျးကို မွှငျ့တငျရနျ ရညျရှယျ ထားသညျ့ လြှပျစဈကား ထုတျလုပျရေးနှငျ့ အားသှငျးစခနျးမြား ဖှံ့ဖွိုးရေးနှငျ့ ယှဉျပွိုငျထုတျလုပျရေး ကဏ်ဍမြားတှငျ အားသာခကျြ ရှိနသေညျ။
ဥပဒကွေမျးထဲမှာ တိကတြဲ့ မူဝါဒတှေ အကွံပွုခကျြတှေ၊ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှေ ပါရှိပွီး ၂၀၃၀ ပွညျ့နှဈမှာ အမရေိကနျတလှားက ပွညျသူ သနျး ၅၀ ကို ငှတေောငျးခံရေးစခနျးတှေ တညျဆောကျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အားသွင်းစခန်းပေါင်း ၈၀.၇ သန်းအထိရှိပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်နဲ့မတူဘဲ မြောင်တရုတ်ရဲ့ အားသွင်းစခန်းစုစုပေါင်းဟာစာရငျးဇယား.
သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်က လျှပ်စစ်ကားသစ် စတီယာရင်ကို လောင်စာဆီမှ မောင်းနှင်သုံးစွဲသူများကို အားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြား၂ ရာခိုငျနှုနျးသာကားဝယျယူမှုပမာဏစုစုပေါငျးရဲ့ အခြိုးအစားကိုဖျောပွလိုကျပါတယျ။ ရိုက်တာသတင်းဌာန၏ သုတေသနအချက်အလက်ကို ကိုးကား၍ Canalys ကုမ္ပဏီက ၂၀၂၀ တွင် တရုတ်ကားထုတ်လုပ်သူ ခရီးသည် ၁.၃ သန်းခန့်ရောင်းချခဲ့ပြီး အမေရိကန်ကားထုတ်လုပ်သူ ၃၂.၈ သန်းသာ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှုနှေးကှေးခွငျးက ဂြိုးဘိုငျဒနျ အစိုးရ၏ အဓိက ရညျမှနျးခကျြမြားထဲမှ တခုဖွဈပွီး သမ်မတ Trump ၏ အဓိက ထှကျခှာမှုသညျ သမ်မတ သကျတမျး ကုနျဆုံးသညျ့ ဇနျနဝါရီလတှငျ ပွီးဆုံးမညျ ဖွဈသညျ။
ကမ်ဘာကွီးပူနှေးလာမှုကိစ်စအတှကျ အမှမျးတငျခံရလရှေိ့သညျ့ အမရေိကနျနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးလမျးကွောငျးမြားထဲမှ မြှျောလငျ့ခကျြ အရှိဆုံးမှာ လာမညျ့နှဈအနညျးငယျအတှငျး ဘဂေငျြးနှငျ့ ဝါရှငျတနျမှ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြား ပိုမိုအလေးပေး ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျရနျ လိုအပျသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ကာလုံလတ်တလော ဆွေးနွေးပွဲရှန်ဟိုင်း ရာသီဥတုရေးရာ အမေရိကန် အထူးသံတမန် ဂျွန်ကယ်ရီဟာ တရုတ်နဲ့ လက်တွဲပြီး ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ပိုမိုကျယ်လောင်လာခြင်းနှင့်အတူ နှစ်နိုင်ငံအကြား လျှပ်စစ်ကား ပြိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Tags: Biden | biden administration | electric bus | electric vehicle | green action | tesla
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ ပြောကြားချက်အရ စမတ်နည်းပညာသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ တန် ဒစ်ဂျစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေး စီးပွားရေးတွင် နှစ်ဆတိုး
ကိုPandaily Sep 22 Sep 22 မှာ Posted
ထိပ်တန်းစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တစ်ဦးကလည်း ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် နည်းပညာသစ်များကို ကူညီမည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး စီးပွားရေးအရွယ်အစား နှစ်ဆကျော် တိုးတက်လာစေရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ခေတ်မီရေးအားသစ်များကို ပံ့ပိုးပေးနေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက အမြတ်အစွန်းများသည့် ကျူရှင်ဆရာများကို နှိမ်နင်းပြီး မိဘများနှင့် ပညာရေးလုပ်ငန်းများမှ အလုပ်သမားများကို ဒုက္ခပေး
ကိုWeiyu Sep 19 Sep 19 မှာ Posted
"Welcome to the We WeChat Group ကို ကြှနျမတို့ရဲ့ အတနျးပိုငျဆရာ JJ က ကြှနျမတို့ရဲ့ အှနျလိုငျးသငျတနျးတှကေို ဇူလိုငျ ၁၂ ရကျကနစေတငျပွီး ကြှနျမတို့ရဲ့အပလီကေးရှငျးကို ဒေါငျးလုပျဒျဆှဲနိုငျမှာဖွဈပါတယျ" လို့ ဆိုပါတယျ။
ရီရှိန်းကော်ဖီ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဂျုဗင်တပ်သည် ဂျုဗင်တပ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း တိုးချဲ့ရန် နှေးကွေးခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ဘဏ္ဍာငွေရှာရန်
ကိုPandaily Sep 18 Sep 19 မှာ Posted
Charles Lu Yang Yong-ong စားသောက်ဆိုင်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Ryan Coffee မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ ထပ်မံရယူခဲ့သည်။
တရုတျဗားရှငျးတုနျအသံကွောငျ့ အသကျ ၁၄ နှဈအောကျ ကလေးငယျမြား နစေ့ဉျအသုံးပွုနိုငျမညျ့ ဝနျဆောငျမှုကို မိနဈ ၄၀ အတှငျး ကနျ့သတျမညျ
Son Tone ရဲ့ အလယ်အလတ်ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ Son Tone ရဲ့ ကြေညာချက်အရ အသက် ၁၄ နှစ်အောက်ကို Verification အသုံးပြုသူတွေအားလုံး လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့ “Child Model” အက်ပလီကေးရှင်းကို နေ့စဉ် မိနစ် ၄၀ ထက် မပိုတဲ့ အချိန်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
UNISOC ၏ ကမ္ဘာ့Chip Market ထိပ်ဆုံး လေးနေရာတွင်
ကိုPandaily Sep 18 Sep 18 မှာ Posted
UNISOC (Shanghai) Technology Co., Ltd. သညျ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဒုတိယသုံးလပတျကာလအတှငျး ကမ်ဘာ့စမတျဖုနျး အပလီကေးရှငျး လုပျငနျးမြား၏ ဈေးကှကျဝစေုကို ၈.၄ ရာခိုငျနှုနျးအထိ သိမျးပိုကျထားပွီး၊ Open Market (Apple) တှငျ နံပါတျသုံးနရောတှငျ ရပျတညျနသေညျ။